Ogaden News Agency (ONA) – 12 Hay’adood oo Laga Caydhiyay Wadanka Itoobiya.
12 Hay’adood oo Laga Caydhiyay Wadanka Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ October 30, 2016
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis-ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu taliska wayaanuhu wadanka ka caydhiyay 12 hay’adood oo ku sugnaa gudaha wadanka Itoobiya.
Hay’adaha shaqo joojinta lagu sameeyay ayaa isugu jiray hay’ado caalami ah (International NGO) iyo kuwo deegaan ah (local NGO) waxaana dhamaan tood lagu wargaliyay in ay joojiyaan shaqooyinka ay wadaan isla markaana ay wadanka iskaga baxaan.
Xukuumada wayaanaha ayaa hay’adaha ku eedaysay in ay jabiyeen shuruucdii ay u dajiyeen xukunkii deg degga ahaa ee wadanka ay kusoo rogeen kaas oo ay ku sheegeen in lagu xalinayo mashaakilka wadanka kajira.
Wax la layaabo ma aha in uu taliska wayaanuhu wadanka ka caydhiyo hay’ado ama wariyeyaal waxaana taliska Gumaysiga Itoobiya dhaqan iyo caadaba u ah af qabashada dadka kahadla xuquuqda bini’aadamka.
Arintan ayaa imaanaysa kadib markay kooxda TPLF si khasab ah wadanka uga saartay hay’ado ama shakhsiyaad magac leh kuwaas oo dhamaan la caydhiyay mudadii uu jiray xukunkii deg degga ahaa ee wadanka sida aan sharciga waafaqsanayn loogu soo rogay.
Sikastaba ha ahaatee falalkan ay kooxda TPLF ku dhaqaaqayso ayaan wax xal ah soo kordhinaynin waxaana lafilayaa in mashaqada wadankaas kajirta ay kasii dari doonto.